Madaxweyne Gaas oo Daah-Furay Sanduuqa horumarinta G.Mudug – Radio Daljir
Diseembar 24, 2015 11:01 b 0
Khamiis, December 24, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta 24-Dec-15 magaalada Gaalkacyo ka daahfuray Xafiiska Sanduuqa Horumarinta Gobolka Mudug, sanduuqaas oo hore loogaga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Munaasibaddi lagu daahfurayey Xafiiska ayaa waxaa goob joog ka aha Guddoomiyaha Guddiga Sanduuqa, guddoomiye ku-xigeenka guddiga, xubno katirsan guddiga sanduuqa, Nabadoono, ganacsato, aqoonyahan iyo qurba-joog .
Guddoomiyaha Guddiga Sanduuqa horumarinta gobolka Mudug Amiir Maxamuud Yuusuf ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey sida uu ugala soo qayb galay daahfurka xafiiska isla mar ahaantaana ka-warbixiyey halka uu marayo sanduuqu isagoona sheegay in waxbadan oo kamid ah dhaqaalihii sanduuqa loogu yaboohay ay soo xeroodeen inkastoo ay jiraan dhaqaale lagu yaboohay balse aan weli soo gaarin sanduuqa.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida uu ugu faraxsanyahay daahfurka xafiiska oo ah mid wax badan kusoo kordhin doono horumarka baaxadda leh ee dawladdu kawado gobolka Mudug isla markaasi loo baahan yahay in lagaga dhabeeyo ballan qaadyadii hore loogalay oo ku qotomey kaqayb qaadashada tabarucaadka lagu horumarinayo Gobolka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa qurba joogta Puntland ugu baaqay inay kaqayb qaataan horumarka ay dawladdu kawado Puntland isla markaasi ay bixiyaan qof kasta wixii uu bixin karo si wax-badan looga bedelo wejiga Puntland.
“waxaa laydinka rabaa maaha wax badan konton doolar xataa haddaad heli karto soo dir waayo waxa ladhisayaa waa dalkeenii waa mustaqbalkaagii ee wax ku darso, maxaa yeelay markaad timaadid cusbataal fiican buu ilmahaagu helayaa, waxbarasho fiican buu heleyaa, jid fiican bay marayaan Airport fiican bay kasoo degayaan”ayuu yiri madaxweyne Dr.Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntaland ayaa dadka gobolka Mudug ku tilmaamay inay tusaale u yihiin gobollada kale ee Puntland isla markaasina sanduuqani haddii uu fashilmo aanay suura gal ahayn in gobollada kale ee Puntland laga hir geliyo barnaamijkan isku tashiga ah, welibana ku booriyey in meel looga soo wada jeesto sidii looga hor tegi lahaa dib u dhac kasta oo ku imaan kara dardargelinta Sanduuqaasi.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale sheegay qorshaha dawladda ee ku aaddan sanduuqani inuu yahay sidii Puntland oo dhammi ay u heli lahayd Jidad, Dekedo iyo Garoomo diyaaradeed isla markaasna loo baahan yahay inaan loo kala harin kaqayb qaadashada sanduuqan si looga dhabeeyo himiladaasi.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas shacabka gobolka mudug ugu baaqay inay garab istaagaan guddiga loo xil-saaray dhaqaale ururinta Sanduuqa gaar ahaan haweenka gobolka Mudug oo ah laf dhabarta dhaqaalaha gobolka Mudug isla markaasina labixiyo wixii hore loogu yaboohay.
Geba-gebadii Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa guddiga ku booriyey inay bulshada u soo bandhigaan bil walba dhaqaalaha soo gaarey iyo kharashaadka baxay si loo helo xisaab celin dhab isla markaasina kalsooni dheeraad ah loogu muujiyo Bulshada.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Jimce_25